အိုင်ဖုန်းသတင်းများ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
iPhone ကို ၎င်းသည်လက်ကိုင်ဖုန်းသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည် Apple။ ပထမဆုံးမော်ဒယ်ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်စတင်ရောင်းချသည်။ ၎င်းသည်ဈေးကွက်တွင်ပထမဆုံးသောဖုန်းဖြစ်သည် Multi- touch မျက်နှာပြင် capacitive နှင့်ခလုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်၎င်း၏မျိုးဆက်၏ပထမ ဦး ဆုံး။ သူ့ operating system ကို iOS ကိုဖြစ်ပါတယ်iPod Touch နှင့် iPad ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သူ့ တော်လှန်ရေးသမား interface ကို ၎င်းသည်လက်ရှိမိုဘိုင်း operating system များအားလုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ iPhone သည်သမိုင်းတွင်အရောင်းရဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာကိုအခြားလက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်ကွဲပြားသောအင်္ဂါရပ်သည်အသုံးချပရိုဂရမ်များဖြစ်ပြီးအားလုံးနီးပါးအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိသည်။
Ottocast U2-X (နှင့် Android Auto) ဖြင့် ကြိုးမဲ့ CarPlay
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ရက် .
သေးငယ်သော Ottocast U2-X အဒက်တာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏သမားရိုးကျ CarPlay ကိုတရားဝင်နှင့်ထပ်တူဖြစ်သောကြိုးမဲ့ CarPlay အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်စေသည်၊ နှင့်...
AirPods Pro2အသစ်လည်း အလားတူပါပဲ။
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ပေါင်း .
လာမည့် AirPods Pro2ကို ယခုနှစ်ကုန်တွင် မျှော်လင့်ထားပြီး iPhone အသစ်နှင့် လက်တွဲမည်မှာ သေချာပါသည်။
iPhone ၏ built-in ဂီတအသိအမှတ်ပြုခြင်းအင်္ဂါရပ်သည် iOS 16 ရှိ Shazam နှင့် ထပ်တူပြုပါသည်။
por Karim Hmeidan လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်ပေါင်း .
စမတ်ဖုန်းများ မိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် အံ့အားသင့်ဆုံးသော အပလီကေးရှင်းများထဲမှ တစ်ခုမှာ Shazam အက်ပ်...
သင့်စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို အားသွင်းရန် အပေါက်လေးခုပါရှိသော Satechi 108W အားသွင်းကိရိယာ
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်ပေါင်း .
သင့် MacBook Pro အပါအဝင် သင့်စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် အားသွင်းကိရိယာကို ရှာဖွေနေပါက၊ သင့်အား အကောင်းဆုံးပြသပေးမည်ဖြစ်ပါသည်...
ဥရောပသာမက US တွင်လည်း universal USB-C အားသွင်းကိရိယာ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
por Karim Hmeidan လွန်ခဲ့တဲ့6ရက်ပေါင်း .
USB-C ပါသော iPhone သည် အမှန်တကယ်ဖြစ်လာမည် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံးဖြစ်သင့်သည်... ဥရောပသမဂ္ဂသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်...
UGREEN HiTune T3- ယူရို 50 ထက်နည်းသော ဆူညံသံများကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့6ရက်ပေါင်း .
ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် ဆူညံသံများကို ပယ်ဖျက်ပေးသည့် UGREEN HiTune T3 “True Wireless” နားကြပ်များကို စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၊
HomeKit နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော Meross LED Strip ကို လေ့လာခြင်း။
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ် .
အလျား5မီတာနှင့် အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကို HomeKit နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော Meross RGBW LED Strip ကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
iPhone 14- အရှေ့ကင်မရာနှင့် ၎င်း၏ ကြီးမားသော တော်လှန်ရေး
por အဲလက်စ်ဗစ်ဆန်တီ လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
ယခုနှစ်တွင်၊ ထုတ်ဝေမှုအများအပြားတွင် Apple သည်အသစ်၏အရှေ့ဘက်ကင်မရာအတွက်အကြီးစားမွမ်းမံမှုပြုလုပ်ရန်အကြံပြုထားပြီးဖြစ်သည်...
ဤသည်မှာ iOS 16 လော့ခ်ချမျက်နှာပြင်အသစ်ဖြစ်သည်။
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်သတ္တပတ် .
iOs 16 သည် ၎င်း၏ ပထမဆုံး Beta နှင့်အတူ ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကို သင့်အား ပြသရန်အတွက် ၎င်းကို စမ်းသပ်နေပြီဖြစ်သည်။ ငါတို့စတင်…
၎င်းတို့သည် Apple ၏ iOS 16 အသစ်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော iPhone များဖြစ်သည်။
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်သတ္တပတ် .
iOS 16 သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ WWDC22 ဖွင့်ပွဲနေ့တွင် နှစ်နာရီနီးပါးကြာပြီးနောက်...
iPadOS သည် Weather အက်ပ်နှင့် iOS 16 တိုးတက်မှုများကို ရရှိသည်။
por Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်သတ္တပတ် .
iPadOS သည် iOS 16 တွင် ပါရှိသည့် ကျန်အင်္ဂါရပ်များကို လက်ခံရရှိထားသော်လည်း ...
ဓါတ်ပုံများကို iPhone မှကွန်ပျူတာသို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း
WhatsApp chats ကို iPhone မှ Android သို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲ
သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုပိတ်နည်းသို့မဟုတ်ဖျက်နည်း
iPhone X အသစ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူအဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်ပြန်လည်စတင်ခြင်း (သို့) ပြန်လည်စတင်ခြင်း
သင့် iPhone ၏နောက်ဆုံးတည်နေရာကိုမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း၊ ၎င်းသည်ဘက်ထရီကုန်သွားလျှင်ပင်
iPhone XS နှင့် XS Max အသစ်၏ Dual SIM မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
iOS 12 တွင် SIM ကဒ်ပင်ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲပစ်မည်နည်း
Find My iPhone ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
သင့် iPhone သည်အသစ်၊ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ထုံးစံ၊ အစားထိုးခြင်းရှိမရှိမည်သို့ပြောရမည်နည်း
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ Apple မှဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ
Mac မှဓာတ်ပုံများကို iPhone မှ External Hard Drive သို့တင်သွင်းနည်း
iPhone X နှင့်အပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနည်း
iCloud နှင့် Google ပြက္ခဒိန်များကိုလွယ်ကူစွာစည်းညှိနည်း
iPhone X ကိုဘယ်လိုပိတ်မလဲ၊
သင်၏ iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iTunes မှသင်၏စာရင်းသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက်နည်း